पुरुषले गरे सर्पसँग बिहे ? - Anubhabi News Portal
पुरुषले गरे सर्पसँग बिहे ?
Last updated October 17, 2020 21:50
यो दुनियाँमा कहिलेकाहीँ निकै अनौठा कुराहरु सुन्न पाइन्छ । ठूला बडाको कुरा छाडौँ, आम मान्छेले सामान्यरुपमा बिहे गर्दा चर्चाको विषय बन्दैन । तर जबकि कुनै मानिसले सर्पसँग बिहे गर्दछ, त्यो सर्वत्र चर्चाको विषय बन्दो रहेछ ।
थाइल्याण्डका एकजना युवकले विषालु सर्पसँग बिहे गरेर सबैलाई तिनछक पारिदिएका छन् । आफ्नी भूतपूर्व प्रेमिकाको मृत्युपछि मृतक प्रेमिका सर्पको रुप धारण गरेर आएकोले आफूले सोही सर्पसँग बिहे गरेको जिकिर उनको छ ।
पाँच वर्षअघि ती युवकी प्रेमिकाको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि विक्षिप्त बनेका ती युवकले अन्ततः एउटा १० फिट लामो विषालु गोमन सर्पसँग बिहे गरे । त्यसपछि उनले उक्त गोमन सर्पलाई आफ्नो पत्नीजस्तै गरेर स्याहार गरेका छन् । उनी सर्पसँगै सुत्दछन्, सँगै खाना खान्छन् र रोमान्स पनि गर्दछन् । सर्पसँगै बसेर टिभी हेर्नेदेखि पिकनिक सम्म जाने गर्दछन् उनी ।
मृत्युपछि आफ्नी प्रेमिका गोमन सापको रुपमा जन्म लिएर आफ्नो पत्नी बन्न आएको दाबी उनको छ । गोमन सर्पलाई निकै रिसाहा तथा विषालु सर्प मानिन्छ । तर अनौठो त के भने ती युवकलाई अहिलेसम्म त्यो सर्पले कुनै आक्रमण गरेको छैन ।